Izinto ezili-10 eziye zalahleka kwi-Arhente yakho eziqhubeka nokulimaza ishishini lakho | Martech Zone
Izinto ezili-10 eziye zalahleka kwi-Arhente yakho eziqhubeka nokulimaza ishishini lakho
NgeCawa, ngoSeptemba 19, 2010 NgoLwesihlanu, ngoJuni 19, 2015 Douglas Karr
Izolo, bendonwabile ngokwenza indibano yocweyo kunye nommandla Izithethi National Association, ekhokelwa UKarl Ahlrichs. Kwizithethi zoluntu, ukuba kubalulekile ukuba ubukho web enkulu kwaye uninzi balaba amangaliswa ukufumana ezinye izikhewu ezinkulu qhinga.
Uninzi oku kungenxa kolu shishino iye itshintshe kakhulu ... kwaye arhente ezininzi ningazigcinanga up. Ukuba ubeka iwebhusayithi nje, kufana nokuvula ivenkile embindini wendawo. Kusenokuba entle, kodwa ukuba akuyi ukufumana naliphi abathengi. Nazi izinto ezili-10 ekufuneka zibandakanywe yiarhente yakho xa usenza indawo yakho:
Inkqubo yoLawulo loLawulo - Maxa ukuba arhente ukubamba iiklayenti zazo bathinjwa kwakhona iye nohlela xa bebaninzi kangaka iinkqubo zolawulo isiqulatho kumnandi emhlabeni. Iinkqubo zolawulo lokuqukethwe zikuvumela ukuba ungeze kwaye uhlele indawo yakho ngendlela othanda ngayo, xa unqwenela njalo. arhente wakho kufuneka bakwazi ukusebenzisa kuyilo yakho phantse injini theming naziphi iinkqubo zolawulo isiqulatho robust '.
UkuSebenza kweeNjini zoPhando - Ukuba arhente yakho akaqondi iziseko enjini yokukhangela noun, kufuneka ufumane i-arhente entsha. Oku kufana nokwakha sayithi kunye nesisekelo. Iinjini zokukhangela yincwadi entsha yeefowuni… ukuba awukho kuyo, sukulindela ukuba nabani na akufumane. Ndiza kutyhiliza ukuba banokwazi nokukunceda ngokuchonga amagama athile ekujoliswe kuwo.
Uhlalutyo - kufuneka ube nolwazi olusisiseko kubahlalutyi kwaye ukuba babone indlela loo amaphepha nokuba yeyiphi ikhontenti iindwendwe zakho bexakeke ukuze uphucule isayithi yakho phezu kwexesha.
Ehlelekile nevidiyo Ukubhloga kuya kubonelela inkampani yakho ngeendlela zokunxibelelana neendaba, phendula imibuzo ebuzwa rhoqo kunye nokwabelana ngempumelelo kunye nethemba lakho kunye nabaxumi kunye nokubanikeza ngeendlela zokulandela, ngokubhalisela, kunye nokunxibelelana ngembuyekezo. lakho kufuneka kupapashwa kwi ngalinye. Video kuzakususa ton site lakho - yenza iingcaciso of iingqiqo ezinzima lula kakhulu ngokunjalo ibonelela njengentshayelelo enkulu ebantwini emva inkampani yakho.
Qhagamshelana Form - Asinguye wonk 'ubani ukuba ufuna ukukhetha ifowuni bakubize, kodwa baya ukunibhalela ngokusebenzisa ifomu zakho zoqhagamshelwano. Kukhuselekile kwaye kulula. Akukho mfuneko yokuba bayicwangcise… banokukufumanela iakhawunti ngoku umakhi weefom online,IFomstack , Kwaye ukuba phezulu kwaye isebenze!
UkuSebenza kweSoftware - site lakho uyibheke enkulu ifowuni. Kulula ukuphuhlisa i-CSS ephathekayo (iphepha lesitayile) elenza ukuba abatyeleli abahambahambayo bakhangele indawo yakho, bafumane indawo okuyo, okanye ucofe ikhonkco ukwenza umnxeba wefowni.
Twitter - arhente wakho oya kumakhela imvelaphi esinyanzelisayo kwiphepha lakho Twitter elihambelana ngokuqhayisa site lakho. Kananjalo kufuneka badibanise blog yakho usebenzisa isixhobo efana Twitterfeed ukuba Ukufuna ngokuzenzekelayo uhlaziyo yakho blog. arhente wakho kufuneka sihlanganise twitter kwi sayithi yakho, mhlawumbi ngokusebenzisa i icon elula zentlalo okanye nangokubonisa umsebenzi wakho yakutshanje kwi sayithi yakho.
Facebook - arhente wakho kufuneka isicelo brand yakho lisiko page Facebook nokuhlanganisa blog yakho ngokusebenzisa nowuthsi okanye Twitterfeed.
Imihla yokuLungisa --yenzelwe Well Uvusa-To-Action kwi sayithi yakho iya kubonelela indlela nokuthethathethana iindwendwe zakho kwaye page kokwehla kuzakuguqula zibe abathengi. arhente lakho kufuneka nixoxe iinketho nawe ukuqhuba njani umkhondo ngalinye iphepha le website lakho - ngokusebenzisa demo, whitepapers, iifom inkcazelo engakumbi, eBooks, ukopisho, iimvavanyo, njlnjl ukuba iinkcukacha zoqhagamshelwano Qokelela atshabhise.
email Marketing - Iindwendwe iwebhusayithi yakho lihlala lilungile ukuba uthenge ... abanye babo ungafuna unamathele ejikelezayo umzuzwana phambi kokuba isigqibo ukuyithenga. Incwadana yeendaba yeveki okanye yenyanga exoxa ngolwazi olufanelekileyo kunye nexesha elifanelekileyo inokuba iqhinga nje. arhente wakho kufuneka ukuba phezulu kwaye isebenze nge email uphawu a okuqinileyo Umboneleli wesevisi ye-imeyile, Njengesekethe. umxholo wakho blog Unga enze automated emails imihla inkqubo yabo ukuze nina nkqu ukuba login!
Ezinye iiarhente zinokutyhalela emva ekwenzeni wonke lo msebenzi kokubini nakwiindawo ezingaphandle kwesiza… andikhathali. Lixesha lokuba benyuke kunye nabathengi babo kwaye baqonda ukuba ukutyhala nje iwebhusayithi entle akonelanga. Kule mihla, isicwangciso sakho kufuneka ngaphaya site lakho kwaye ziquka zosasazo zasekuhlaleni,-enjini yokukhangela noun, nakwiindlela zokuthengisa kwangaphakathi.
I-arhente yoqwalaselo: Ukuba akunazintlobano ulungiselela iinkonzo yakho Sebenzisa ngokupheleleyo iwebhu, Wena uthatha nje imali umsebenzi isiqingatha-esile. Abaxhasi bakho baxhomekeke kuwe ukuba ubakhele ubukho bewebhu kunye nesicwangciso esibenza babe neshishini.
tags: arhenteNkonzoUhlalutyokublogaifomu zoqhagamshelwanoInkqubo yolawulo lomxholoemail MarketingFacebookmaphephaUkulungiswa kwefowunienjini yokukhangela nounTwitterukuthengisa ividiyoukuvota
Imidiya yokuncokola yiPR entsha
Sep 20, 2010 kwi-8: 00 AM
uhlobo Ndandicinga konke oko eqhelekileyo ngoku. Yinto Lilishwa ingakumbi ukuba eminye imibutho nangoku ukuba usebenzisa inkqubo yolawulo content wokwenene!
Sep 20, 2010 kwi-8: 06 AM
Vumelana noMichael! Ngelishwa sisenazo zombini iiarhente ezisebenza kwi-niche yazo kuphela kwaye zingaziqondi iimfuno zeshishini okanye amathuba okoko angahambelani neendlela ze-Intanethi, ukukhangela kunye nemithombo yeendaba zentlalo. Kananjalo, amanye amashishini anetyala - amanye amashishini awabuqondi ubuchule obunokuthi bunike isicwangciso esikhulu, ke bayokuthenga ezona ndawo zitshiphu banokuzithenga.
Sep 21, 2010 kwi-10: 24 AM
Kwi-vacuum zonke ezi mpawu ziyavakala, kwaye njengenkampani yewebhu dev sizinika abathengi bethu, nangaphezulu, njengesicelo esiphathwayo ukuba siyayifanela imodeli yeshishini labo. Ngelishwa amanye amashishini ajonga ibhlog okanye kufuneka aphathe indawo yabo njengomthwalo, uninzi luza kukhetha ukungahambi kule ndlela. Uluvo lwabo kukuba, kutheni ukhubeka xa uzama ukongeza umfanekiso omtsha kwiwebhusayithi yethu kwaye ulunge iiyure ezimbalwa, xa ndinokuhlawula umphuhlisi wam imizuzu eli-15.
Kutsha nje umhlobo wam wavelisa website yakhe, yaye xa ndambuza ukuba bathatha ixesha elide kangakanani, wayengaqinisekanga ukuba kodwa phezu 100 iiyure zophando, uqeqesho kwi WordPress kunye nokuphunyezwa, kwaye kwakhona ukuphunyezwa-kulungile, ukuba ukuguqulela ukuba zibe rate yakhe yeyure nomqeqeshi sobuqu (malunga $ 90), oko kwandisa ukuya imali yokwenene.
Ngoko ke, lo gama zonke ezi zinto ukwenza nto iyevakala, nabanini bamashishini abaninzi, kuquka enye ndathetha namhlanje, jonga kwi ukubhloga njl njengomnye umsebenzi, elinye nje abanalo ixesha ukwenza yonke imihla. Ke, ukuba ngaba umphuhlisi wabo uyawenza umsebenzi kwaye awususe kuluhlu lwezinto abanokuzenza, andibizi ukuba kubanjelwe ukubanjwa-- Ndibiza ukusetyenziswa okukhoyo kolawulo lwexesha.
Ngokupheleleyo uyavuma, Preston. umba yam kukuba Arhente musa nokuba ukuxoxa ithuba iinkonzo zabo ibhlogi nokuvavanya ukuba okanye hayi oko iqhinga iphila. Oko shwa.
Sep 22, 2010 kwi-7: 18 AM
Yeah, kakuhle ngalinye enye yezi ngongoma kufuneka kuxoxwe waphononongwa ukuya ziyawushiya idini kubo kukho impazamo enkulu. Ngamanye amaxesha kubonakala ngathi ndifuna ukubongoza abathengi ukuba behle ngendlela ye-SMM, kodwa uninzi lwamashishini endidibana nawo awakafuni ukuyichukumisa-kuphela xa umntu 'ongathengisi' ukuphunyezwa kweenkonzo ezibonisa into enokuba neziphumo, yithi umhlobo, ngaba ke ngoko kubonisa umdla.
Ndicinga ukufumana umda koluqoqosho, ngalinye lala manqaku liyimfuneko kuyo NALIPHI na ishishini, kodwa ngelishwa zisekhona iinkampani phaya ngaphandle ezinesiza sokuqala kwisiza esikhalela amaphepha okufika, ukubiza isenzo, kunye nebhlog- okwangoku Abanini bamashishini bathi “Andifumani shishini kwi-Intanethi.” Kaloku, lol, akumangalisi ... 😉